सगरमाथा टिभीबाट पत्रकारीता गरेका अनुप आचार्य अस्पतालको बेडमा छट्पटाउदै – ज्वालाको अपिल ! – Complete Nepali News Portal
सगरमाथा टिभीबाट पत्रकारीता गरेका अनुप आचार्य अस्पतालको बेडमा छट्पटाउदै – ज्वालाको अपिल !
ScotNepal October 10, 2020
काठमाण्डौं। सगरमाथा टेलिभिजनबाट पत्रकारिता गरेका अनुप आचार्य अहिले जिवनको मरणासन्न अवस्थामा छन् । पत्रकारिताबाट आफ्नो परिवार धान्न नसकेर खाडीमा समेत गएर आएका आचर्यलाई एका एक बज्रपात परेको छ।
बुबाको उपचार गर्दै सारा सम्पती सकिएको तर बुबालाई बचाउन नसकिएको अर्को बिडम्बना छदै आँफैलाई ठूलो दशा लागेको बताएका छन् ।
डाक्टरको अनुसार आचार्यको प्यानक्रीयाज ड्यामेज भएको छ । उपचारको क्रममा अहिले उनी अस्पतालको बेडमा छन् । पैसा सकिएसी सबैलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गरिएको छ ।
अनुप आचार्यको सहयोग को लागी सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौलाले अपिल गर्दै सबैलाई शेयर तथा सहयोग गरि बँचाउनको लागि अनुरोध गरेकी छिन्।
उनी लेखछिन् : “सहयोगको अपिल Anup Acharya सगरमाथा टीभीबाट पत्रकारितासुरु गरेर न्यूज–२४ मा पनि रहे केही वर्ष । थोरै समय माउन्टेन टीभीको सदस्य पनि रहे । ए’क दशकको सक्रिय टेलिभिजनकर्मले औसत जीवन धान्न पनि हम्मेहम्मे परेपछि कतार हानिए ।
उनी कतार लाग्दा ‘अर्का पत्र’कार पनि लागे खाडी’ भनेर न्यूज पोर्टल र सा’माजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा भयो । श्रममजीविको सम्पक्ति पाखुरी र पसिना भने झैं कतार रहुन्जेल राम्रै पनि थियो होला । केही कमाए पनि होलान् ।
पहिले। पिताजी बिरामी भएकाले फागुनतिर नेपाल फर्किएका उनले शिरीखुरी उपचारमै सकाए । तर पनि पि’ताजीले थप अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नु भएन, निधन भयो । अब यतै केही गर्छु (पत्रकारितामै फर्किन्छु) भन्दै थिए ।
अहिले। केही साहुजीका ठेके’दारले अन्तरवा’र्ता पनि लिएका थिए । त्यही क्रममा उनी विरामी परे । अघिल्लो पटक झण्डै एक महिना अस्पता’ल बसेर निस्किएका उनमा रोग बल्झियो । र, दोस्रो पटक पन्ध्र/बीस दिनदेखि नर्भिक अस्पता’लको आइसीयूमा छन् ।
प्यानक्रियाज ड्यामेज भए’काले अस्ती अप्रे’सन गरिएको छ । र, चिकित्सकका अनुसार उपचारको क्रम जारी नै छ । परिवार स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उप’चारमा आठ/दस लाख खर्च भइसकेको छ ।
र, अबको खर्च झनै य’किन छैन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई यतिबेला सहयोगको खाँचो छ ।
अनुप आचार्य स्वयम् ले पनि अस्पता’लबाट यस्तो सन्देश पठाएका छन् :
Dear All, I Am admitted in Norvic Hospital since long time and gone through laparotomy surgery yesterday. I am facing too much financial problem. Your small financial help will support me to face this problem. Hope for your positive response. From Norvic Hospital Heart Command Unit Bed No 209.
सहयोगको लागि : Anup Acharya Nepal Investment Bank Branch, Tripureshowr Kathmandu Swif code:- NIBLNPKT Account Number :- 03205220250443 contact number +9779841371901 नोट: सेवानै धर्म भएको कारण अनुप जिको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई सक्दो सहयोग गर्नको निम्ति मेचीमहाकाली परिवार पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
आजको राशिफल बि.सं. २०७७ साल मंसिर
दिदी-बहिनी समाज भिक्टोरियाद्धारा यौन/घरेलु हिंसामा परेका
दाँत ब्रस नगरे: गिजाको समस्यादेखि क्यान्सर
‘टिकटक’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि
हेर्नुहोस् मंसिर १६ गते मगंलबारको राशिफल
हामी पृथ्वी देखी धेरै कारणले ऋणी
सुनन’मा दयाहाङ र लक्ष्मीको जीवन्त अभिनय,
साथीको घर हिँडेका किशोरको अपहरण पश्चात
जय पाथिभरा माता सबैको कल्याण गर्नुहोस ! भगवानको शक्ति छ यो ठाउमा , १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो (भिडियो सहित)81K Total Shares
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो सहित)62K Total Shares
दिदी-बहिनी समाज भिक्टोरियाद्धारा यौन/घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको सहयोगार्थ नेपालमा ४०००...
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान रुपन्देहिको पदस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न
माइतीघरमा हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ नारा घन्कियो...
एकदिनका लागि नेपाल आएका चिनिया रक्षामन्त्रीले को संग के भनेर...
कोभिड १९ कोरोना भाइरसको कारण ठप्प रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान...
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोभिड–१९ तथ्यांक: अपडेट — ३३